နေဝင်း(ဘဝတက္ကသိုလ်)-ဘဝတက္ကသိုလ်အစ လမ်းဘေးက-အပိုင်း( ၅ )နှင့် (၆) | MoeMaKa Burmese News & Media
တိုတိုပြောရရင် သွားတွေ့၊ စာရေးဆရာကလည်း သဘောတူ၊ စာမူခကတော့ တခါတည်း
အပြတ်ပေးရ မယ်၊ စာမူကိုလည်း မကြာခင်အပ်မယ်ဆိုပြီး သဘောတူကြပါတယ်။
၁၉၇၇ – ၇၈ လောက်က ငွေသုံးသောင်းဆိုတာ ခု သုံးသိန်းမဟုတ်ဘူး၊သိန်းသုံးဆယ်လောက် ရှိမယ်၊ အကြမ်းဖျင်းဆိုရင်။
(ဒီအကြောင်းတွေကို ကျွန်တော်နှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး
ပေါင်းခဲ့ဖူးသူများတောင် သိပ်မသိကြပါဘူး။ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကိုလည်း
ထုတ်ဖော်ပြောချင်တဲ့ဆန္ဒ ကျွန်တော့်မှာ မရှိ တော့ပါဘူး။ မေးလည်း
ဒီကြားထဲ ဝင်ချင်လို့သာဝင်လာတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ကြည့်တော့လည်း တတ်လို့ဝင်လာတာမဟုတ် ငတ်လို့သာ (ဘဝရပ်တည်မှုအတွက်) ဝင်ရတာဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်
ကိုယ် သိမ်ငယ်မှုတွေကိုပါ ရင်ဆိုင်ခဲ့ ရတာပါ။
ကျွန်တော် လမ်းဘေးမှာ စာအုပ်ရောင်းနေစဉ်အခါ တက်ချင်လွန်းလို့
နိုင်ငံခြားဘာသာ သင်တန်းမှာ ဂျာမန် ဘာသာသင်တန်းကိုစာရင်းပေးပြီး ညနေပိုင်းသင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အကြောင်းညီညွတ်ခဲ့ရင် ဘဝတက္ကသိုလ် အစကာလများ၊ စာရေးဆရာများနှင့် ဘဝတက္ကသိုလ်၊ ပန်းချီ ဆရာများနှင့် ဘဝတက္ကသိုလ်၊.. …. …. …. . နှင့်
ဘဝတက္ကသိုလ် စသည်ဖြင့် ဆက်ရေးချင်ပါသေးတယ်။